Taombaovao Mankalaza Ny Fimaroana ao Bangladesh: Raki-Peo Mankany Amin’ny Lalina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2016 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Aymara, Català, English
Diabe ara-pivavahana ataon'olona an'arivony manavatsava ny araben'i Dhaka renivohitr'i Bangladesh isan-taona ny Mangal Shobhajatra, io no manamarika ny fanombohan'ny Taombaovao Bengali amin'ny volana avrily.
Vao haingana teo ny UNESCO no nanendry ity Filaharambe ity ho Vakoka Ara-kolontsaina Tsy Tsapain-tanana. Saingy misy amin'ity jerena ho toy ny lanonana an-dalambe fotsiny ity no mametraka azy ho fahaiza-mamorona mampijoro ny firaisankina — sy miady amin'ireo herin'ny tsy fahazakana miezaka mitady izay hampisaraka sy hangeja ny Bangladeshis.
Amin'ity fizaran-tantara Mankany amin'ny Lalina ity, misy ny fandraisam-peo Global Voices mangady lalina lohahevitra iray izay tsy mahazo ny tati-baovao mendrika azy, milaza amintsika ny rehetra momba ity Mangal Shobhajatra ity ry Pantha sy ry Rezwan samy mpandray anjara ato amin'ny Global Voices.
Ao anatin'ny fotoana izay toa miaka-danja ao Eoropa sy Etazonia ary ny faritra maro hafa manerana izao tontolo izao ny fankahalam-bahiny, dia i Bangladesh sy ny filaharambeny mandritra ny Taombaovao tsy manam-paharoa ataony angamba no mety hanome aingam-panahy amin'ny fomba iatrehana sy anoherana ireo mamafy ny foam-pisarahana ireo.
Amin'ity fizaran-tantara ity, asongadinay ireo hira manana lisansa Creative Commons avy ao amin'ny Arisivan'ny Mozika Maimaimpoana [malalaka], ka anisan'izany ny Ray Gun – FasterFasterBrighter avy amin'i Blue Dot Sessions; Dramamine avy amin'i Podington Bear; Tribal avy amin'i David Szesztay; Stuck Dream avy amin'i Podington Bear; ary i Ally Pally Happy Clappy avy amin'i krackatoa.
Asongadinay ihany koa ny Duur Deshi Shei Rakhaal Chhele (Acapella) – Rabindrasangeet – Anirban Chakraborty avy amin'ny SoundCloud sy ny feo avy amin'ny lahatsary YouTube navoakan'ny mpisera Azim Khan Ronnie sy nazmulsoft.
Ny sary nasongadina amin'ity tantara ity dia avy amin'ny mpisera Flickr Aaapon (CC BY-NC 2.0).